စောင့်ကြည့် ရန် — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited March 2009 in Networking
ကူညီပါ ဗျာ ကျွန်တော် ဘယ်သူတွေက ဘယ် website ကို အသုံးပြုနေတယ် ဆို တာ ကို မိမိ network မှာ ကြည့်ချင်တယ်ဗျာ အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ကြည့်လို့ ရမလဲ ။ proxy အပြင် တခြား ကြည့်လို့ ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးများ မဆကြပါ၊
kyawswar1500 wrote: »
if u use MS windows, u can use cain&abels to sniff them.
(u not only can know which sites they are browsing for, but also can know their passwords):P
if u use *nix based, u an use the tools such as wireshark etc...
easycafe ကိုသုံးလေဗျ easy cafe မှာဆို ရင် application တွေလည်းစစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ မကျေနပ်ရင် screen shot တောက်ဖမ်းကြည့်လို့ရတယ် သူဖွင့်ထားတာတွေပိတ်လို့ရတယ်
ပြီးတော့ screen ကို ပြောင်းပြန်တွေ ဇောက်ထိုးတွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် :6::6:
ကျွန်တော်သိချင်တာက CyberCafe Software တွေကိုသုံးမှသိတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တခြား software တခုခုကိုအသုံးချပြီး လှမ်းထောက်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ်စက်မှာပဲ run လိုက်တာနဲ့တခြားစက်မှာ ဘယ်site တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကို သိချင်တာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကူညီပါ။ သူများ လျှို ့၀ှက်ချက်ကိုသိချင်လို ့... ဖျက်စီးချင်လို ့ဆိုသည့် စိတ်မျိုးလုံး၀မရှိပါ။ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်နေလို ့မေးချင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါ ခင်ဗျာ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ။
အကို ကြည့်ချင်ရင်တော ့Real VNC ကိုသုံးကြည့်ပါ။ သုံးချင်ရင်တော ့Client မှာ အကုန်လိုက်သွင်းပေးရမှာပါ။ ကြည့်တာတောကြည့်ပေါ့ဗျာ သိက္ခာရှိရှိနဲ ့ပေါ့။ ကြည့်ခံရတဲ ့သူမသိစေနဲ ့ပေါ့ဗျာ။
လိုချင်ရင်တော့ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Cain & Abel သုံးနည်းလေး သင်ပေးပါလားဟင်.... :77:
tools တွေကို ဘယ်လိုသုံးရမှန်းတောင် မသိတဲ့ဘဝမို့ပါ.... (
Cain & Abel သုံးနည်းလေးသိရင် သင်ပေးပါလား ကျွန်တော်လည်း လေ့လာချင်လို့ပါ .... ပညာလေးများ ဖြန့်ေ၀စေလို့ပါတယ် ခင်ဗျာ :77::77:
ကျွန်တော် သိသလောက်ပြောရရင် ဖြင့် client မှာ software install မလုပ်ပဲနဲ့ တစ်ခြား client မှာ ဘယ် site အသုံးပြုတာကို ကြည့်လို့တော့မရဘူး ။ အနည်းဆုံးတော့ client ရဲ့ firewall ပိ်တ်ထားရင်မရဘူး window xp sp2 မှာက firewall build in ပါတယ်လေ ပြီးတော့ remote option on မထားရင်လည်း အဆင်မပြေပြန်ဘူး client မှာတော့ တစ်ခုခု software run မှရမယ်ထင်ပါတယ်... ကျွန်တော်သိသလောက်လေးပြောကြည့်တာပါ အမှားပါရင် ခွင်လွှတ်ပါ ..... :77::77::77:
VNC Steath Version နဲ့ class room spy လို့ software မျိုးလေးတွေကို သုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ... ။ :101:
Nay Lay wrote: »
အကိုပြောတဲ့ ပုံအရဆို.. တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်သုံးတဲ့စက်မှာ. VNC ကဲ့သို့အလားတူ remote ဆော့ဝဲလာတင်တဲ့ အခါ.. ကိုယ့်ဘက်က သိလို့ Firewall ဒါမှ မဟုတ်.. Remote login တစ်ခုခု ကို ပိတ်ထားရင် .. ကြည့်မရဖူးလို့ ပြောတာလား ခင်ဗျာ.. အချိန်ရရင်.. ပြောပေးပါဦး...။
ရုံးတစ်ခုမှာ IT ပိုင်းတာ၀န်ယူထားရတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ... အဲဒါကို စုံစုံလင်လင်သိသင့်တယ်လို့ကျနော်ထင်တာပဲခင်ဗျ။
Network LookOut Administrator ကိုတော့သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ သူလဲမဆိုးပါဘူး။
Use httpsniffer for http traffic.
For the rest ports , you can get dedicated traffic sniffer for different ports.